Ikhaya / Blog / Ezona ngcebiso ziBalaseleyo kwigumbi lokuhlambela, Zonke zikwindawo enye!
2020 / 10 / 16 uhleloBlog 1220 0
Igumbi lokuhlambela lincinci, kodwa liyinxalenye ebaluleke kakhulu yomhombiso kwaye inxulumene ngokusondeleyo nobomi bethu. Yonke imihla ubomi buqala apha buphelela apha. Ukuba ayifakwanga ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa kwenkqubo kuhlala kuthanda ezinye zezi kunye nezinye iingxaki, namhlanje indlu yangasese yaphukile, ngomso ishawa iyavalwa …… yonke imihla inokukuphambanisa.
Kungenxa yokuba igumbi lokuhlambela libaluleke kakhulu kubomi bemihla ngemihla, ke xa sihombisa igumbi lokuhlambela, kufuneka silawule yonke imiba yeenkcukacha, ukuze sizame ukunqanda ifuthe kubomi bemihla ngemihla.
Amanqaku okuhlaziya kwigumbi lokuhlambela
1,Imigca yamanzi oGcino naManzi
Ukulungiswa kwegumbi lokuhlambela, uninzi lweembiza zabahlobo zihlala zilibala ukugcina iindawo ezisebenzisa amandla kunye neendlela zamanzi, kamva zitshintshe indlu yangasese ehlakaniphileyo kunye netawuli yombane kulindeleke ukuba ikhokelele ekusetyenzisweni kwengxaki.
2,Ingxaki kunye neTile yoMgangatho
Yenza ubuncinci iiyure ezingama-24 ngaphambi kokuba iitayile zivuleke kuvavanyo lwamanzi; iithayile zomgangatho kunye neethayile zodonga kulungelelwaniso lomthungo, iitayile zeepheyile ukuqinisekisa ukuba umphezulu wezitena une-1 ° malunga nethambeka lendawo yokuhambisa amanzi, ithambeka kufuneka libheke kumsele omanzi.
3, Yomile kwaye Imanzi Ukuzahlula
Ukuba indlu yangasese ayihlulwanga kwindawo emanzi neyomileyo, kulula ukwenza ukuba amanzi atshize kuyo yonke indawo eshawini, kwaye kulula ukuba abantu batyibilika bawe, nto leyo nayo engakulungelanga ukucoca.
4,Iya kuba yintoni ingxaki xa siTshintsha indawo yangasese yesiqhelo ngeToilet eyiSmart?
Xa ufaka izindlu zangasese eziqhelekileyo, abasebenzisi ngokubanzi abaluthatheli ngqalelo utshintsho olulandelayo lwamanzi nombane, akukho ndawo yangasese igcinelwe unikezelo lwamandla olomeleleyo, iivenkile kunye neendlela zamanzi, ukusetyenziswa kweethoyilethi ezifanelekileyo kuya kuba nzima ngakumbi.
Ukulungiswa kweNdlu yangasese Iingxaki eziqhelekileyo
1, Yiyiphi eyona iluncedo, ukuhlamba okanye ibhafu?
Ngokubanzi, ishawa kufuneka isebenze ngakumbi kunebhafu, ishawa ifike ngexesha elifanelekileyo kwaye ilungile kwaye iyasebenza, isempilweni.
2,Ngaba ikhethini yokuhlamba kulula ukuyisebenzisa?
Kumakhaya amancinci, indawo yokuhlambela incinci, kwaye ukwahlula iglasi kuya kwenza indawo yangasese encinci yoqobo ibonakale igcwele kakhulu. Ke ikhethini yeshawari njengesahlulelo, ke indawo yonke kulwandiso ibanzi ngakumbi kwaye inesisa.
3, Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlambela okukhethiweyo kukaMoses, okanye uMsulwa oMnyama noMhlophe ngokuSebenzayo?
Iziphumo zokuhombisa zikaMoses zilungile, kodwa ixabiso lezixhobo kunye nabasebenzi zibiza kakhulu. Imithetho kaMosisi kunzima ukuyikhathalela kwaye ithanda ukufihla ubumdaka. Zama ke ukuyisebenzisa kwiindawo ezomileyo!
4,I-Countertop Basin Atmosphere Ayisebenzi? Ukhetha njani phakathi kwe-On-Counter kunye ne-Under-Counter Basin?
Isitya setafile sineemilo ezininzi, sinokukhetha okukhulu kunye nomphumo wokuhombisa. Kulula ukuyifaka kwaye kulula ukuyigcina kwixa elizayo. Nangona kunjalo, amanzi kulula ukutshiza ngaphandle xa usebenzisa isitya kwi-countertop.
Ngaphantsi kwetafile yetafile iya kuzinziswa embindini wecomputer, intle kakhulu kunendawo yokubeka eqongeni, kwaye umphezulu wesitya ungaphantsi kwetheyinti, ngoko ke amanzi akwitafile anokuhamba ngokulula angene okanye asule kwisitya , ke impilo ibhathalelwe ngcono.
5,Ukucoca umgangatho kunye nesokethi
Indawo yedreyini yomgangatho kufuneka iqwalaselwe ngononophelo, ngokukhethekileyo ibekwe kwelinye icala leethayile, ukuba iphakathi kwigumbi lokuhlambela, ke umbhobho womgangatho awuyi kuba yeyona ndawo iphantsi nokuba ithambeka njani na iithayile.
Iziseko kufuneka zenziwe ngokutshintsha, ngakumbi kwigumbi lokuhlambela isifudumezi samanzi esitshintshayo kufanelekile. Ecaleni kwesinki kufuneka ushiye ezimbalwa ngakumbi kwizinto eziqhelekileyo ezifana nezomisi iinwele, iireyiza kunye neebrashi zamazinyo zombane!
6,Ukutshatyalaliswa kweNdlu yangasese
Igumbi lokuhlambela ligcwele ukufuma ngakumbi kwaye liqhele ukubonwa ziibhaktheriya, ke kuya kufakwa ifeni yokukhupha kwigumbi lokuhlambela, esombulula ingxaki yobumdaka kwisithuba ngelixa kugcinwa igumbi lokuhlambela lisentsha ~.
7,Ubeko Lobungakanani boMsebenzi ngamnye
Ngaphambili :: Isitayela se-4.95m2 saseScandinavia, eli gumbi lokuhlambela labaselula liMangalisa ngakumbi kuneGumbi lokuPhila! next: Iintsapho zamaTshayina, ngenene azikufanelanga ukwahlukana okwesithathu?